Seychelles, nke bụ agwaetiti ịhọrọ maka ezumike kacha mma na paradaịs | Akụkọ Njem
Seychelles, nke bụ agwaetiti ịhọrọ maka ezumike kacha mma na paradaịs
Mariela Carril | | Nduzi, Agwaetiti Seychelles
Obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ebe kachasị mma na ọdụ ụgbọ mmiri kacha mma na Europe, ọ bụrụ na mmadụ achọghị ịkwụsị n'ụsọ osimiri Mediterenian, ha bụ Àgwàetiti Seychelles. Ọ bụ otu ndị Agwaetiti 115 na Oke Osimiri Indian, nke a na-acha ọcha ájá, ihu igwe na-ekpo ọkụ, ahịhịa ndụ ndụ, osisi cinnamon na udo dị ụtọ.
Amaghị m onye ọ bụla na-enwetụbeghị obi ụtọ na Seychelles, yabụ ọ bụrụ na oge anwụ a ị na-eche ị ga-amata ha, lee ụfọdụ ajụjụ ị ga-emerịrị n'uche iji "nweta ọtụtụ ahụmịhe" ma mara họrọ agwaetiti nke Seychelles ị ga-aga.
2 Agwaetiti Praslin
Agwaetiti dị iche iche ha karịrị otu puku kilomita site n’ụsọ oké osimiri Africa, na mpaghara Mauritius ma ọ bụ Madagascar. Isi obodo nke agwaetiti ndị ahụ bụ Victoria na ngụkọta ọnụ ọgụgụ ndị gbara gburugburu iri puku mmadụ itoolu. Ọ bụ steeti nwekarịchara onwe ya n'Africa wee nweta nnwere onwe ahụ na 1976, mgbe ọ kwụsịrị ịbụ nke United Kingdom, n'agbanyeghị na ọ bụ akụkụ nke Commnwealth.
Ugbu a enwere naanị agwaetiti 16 na-enye ebe obibi mgbe ị na-ekpebi ebe ị ga-anọ, ị nwere ike ịlele onyinye ndị a na agwaetiti ndị a, ọ bụ nzọụkwụ mbụ mgbe ị na-ahazi njem ahụ. Enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ kpakpando nke nwere ọtụtụ okomoko gaa na ụlọ oriri na ọ moreụ moreụ ndị ọzọ mara mma ma ọ bụ ụlọ ndị dị n'akụkụ osimiri. Ya mere, ọbụlagodi na ịnweghị oke ego, ị nwere ike ịnụ ụtọ ya.
Ebe ahụ, ihe ọbụla ọ bụ, mara mma ma na agwaetiti niile ị nwere ohere igwu mmiri, sunbathing, mmiri, snọklịl ma ọ bụ dị nnọọ nwayọọ na-emepe emepe revs na zuru ike.
Ọ bụ agwaetiti nke abụọ kachanụ nke otu a ma mmadụ 6500 bi na ya mana ọ bụ agwaetiti dị jụụ, na-emepeghị emepe karịa Mahe, dịka ọmụmaatụ, na akwadoro ma ọ bụrụ na ịchọrọ izu ike ma zuru ike naanị. Osimiri ndị mara mma na abụọ n’ime ha na-abụkarị otu n’ime osimiri kacha mma n’ụwa: Anse Geogette, Cote D’Or na Anse Lazio. Ọ bụrụ n'ịchọrọ igwu gọọlfụ bụ ebe a na-aga na Seychelles n'ihi na O nwere klọọkụ golf iri na asatọ.
Họrọ agwaetiti a agaghị egbochi gị ịga leta ndị ọzọ n'ihi na ị nwere ike iji ya mee ihe isi maka ịgagharị na ịgagharị. You nwere ike ịhụ nnụnụ na Cousine Island, mangroves na nnukwu mbe na Curieuse Island, ma ọ bụ igwu mmiri na snorkel na St. Pierre. Na Praslin kwesịrị ekwesị enwere ebe atọ: Baie St Anne, Grande Anse na Anse Volbert. E mechaa, ọ b ụ ebighebi.
Osimiri ndị gbara ya gburugburu mara mma, mpempe akwụkwọ ozi zuru oke, nke nwere mmiri turquoise na ájá dị mma. Osimiri bụ ihe kacha mma banyere PraslinNke ahụ na vibe ezumike dị jụụ bụ nke na-emeri, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ịchọrọ ebe kpakpando ise nwere ike ịnwe ya n'ihi na e nwere abụọ, Raffles na Lemuria, nwere osimiri nkeonwe, ụlọ ndị mmadụ na okomoko niile ịchọrọ. Ugwu ugwu dị mma karịa ebe ndịda, Buru nke ahụ n’uche. Gagharị n’agwaetiti ahụ enwere ụgbọ ala dị ọnụ ala na tagzi na ị nwere ike ịgbazite dị ka ịgbazite ụgbọ ala.
Kedu ka ị ga-esi gaa Praslin? By jiri ụgbọ mmiri si La Digue ma ọ bụ si Mahe rute, na minit 45 nke njem catamaran si Mahe ma ọ bụ naanị 15 site na La Digue. Ihe ndị ahụ na-agba ịnyịnya bụ ihe mara mma ma na-ada ada, yabụ ịnwere ike iburu ụgbọelu. Site na La Digue ịgafe dị jụụ na mkpụmkpụ. Ọ bụrụ na ị na-efe site na Air Seychelles ị nwere ike ịgụnye nkwụsị na Praslin wee tụlee nhọrọ ahụ.
Mahé nwere ihe dịka iri isii osimiri na coves zoro ebe niile. O nwere ime ahịhịa mara mma, na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, oke osimiri nwekwara aja ọcha. Omenala bu Creole ma nwee obere obodo na mgbakwunye na obodo a dika Mahe Ọ bụ agwaetiti kasị buru ibu na nke ọtụtụ ndị bi na ya na Seychelles. Victoria, isi obodo, dị n'akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ nke agwaetiti ahụ.
Y’oburu n’achoghi iche otutu ihe ma o bu icho igbapu njem kachasi mkpa, Mahe nwere ike buru ebe njedebe gi: E nwere oke ọhịa, nwe ugwu, e nwere nsụda mmiri, nwe osimiri, ị nwere ike ịme ọtụtụ egwuregwu mmiri. Nwere ike ime obere ọrụ, na usoro nke dịgasị iche, karịa na agwaetiti ndị ọzọ ama ama. Ngwakọta nke obodo mepere emepe na ọdịdị ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na Mahe abụghị New York.
Ogige Ntụrụndụ Morne Seychellois kewara agwaetiti ahụ na mpaghara ọdịda anyanwụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ. O bu oke ohia nke nwere okpomoku nke diri 900 mita. Ọ bụrụ na ị rituo na Victoria ị nwere ike iburu bọs ma ọ bụ tagzi nke na-aga n'okporo ụzọ ma gafere ugwu dị n'akụkụ ụsọ ọdịda anyanwụ ebe enwere ebe ntụrụndụ dị mma, mmiri mmiri dị jụụ na ebe obibi ndị njem nke onwe ha na ọnụahịa dị mma. Ebe a ebe a ma ama bụ spa nke Beau Vallon ma ọ bụrụ na ị nọgide na-aga, e nwere obodo ndị ọzọ mara mma na ụsọ mmiri, ndị na-erughị mmadụ.
Ebe ọzọ na-adọrọ mmasị bụ Anụ Royal, obodo di omimi na ulo nri, ahia na ulo ahia. N'ebe ndịda ụsọ mmiri ị gaghị ahụ ihe ọ bụla mepụtara ma ị ga-ahụ ụfọdụ osimiri kacha mma na Mahe. Can nwere ike iji onwe gị tụnyere osimiri Paslin ma ọ bụ La Digue? Ọ bụrụ na nke gị bụ nrọ osimiri, m ga-ahọrọ ndị nke agwaetiti abụọ ikpeazụ a, nke ka njọ n’enweghị obi abụọ Mahe na-enye ngwakọta na-adọrọ mmasị ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị dị ka ezinụlọ.
Nke ahụ ga-abụ mkpebi m: A na-atụ aro ezinụlọ Mahe.
Ọ bụ agwaetiti kacha nta nke agwaetiti ndị mmadụ bi. Enwere naanị puku mmadụ abụọ bi, o nweghi ọdụ ugbo elu na uzo ole na ole. Ọ bụ ebe kachasị izu ike ma dị jụụ mana nwere ụfọdụ osimiri kachasị mma na ama ama. Nwere ike ịmata La Digue site na Praslin ma ọ bụ Mahe mana ọ bụrụ na ịchọrọ ikuku dị jụụ nke a nwere ike ịbụ ebe ị na-aga.
Ga-abata n'obodo La Passe, nke dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ, nke ị nwere ike isi hụ agwaetiti Praslin. Obodo ndị ahụ adịchaghị anya na ibe ha. Osimiri kachasị mma dị na ndịda ụsọ oké osimiri, n'akụkụ nke ọzọ nke ugwu, Anse Isi I D ’Argent, Petit Anse, Nnukwu Anse, Anse Cocos. N'ebe ugwu bụ Anse Siri ike na Anse Patates. A na-ekwukarị na ọmarịcha osimiri niile dị na Syechelles bụ Isi Iyi D'Argent ka ị ghara ịhapụ ya.
Iji nnwere onwe si n'otu ebe kwaga ebe ọzọ ị nwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ n ’ụlọ ezumike n’ụlọ oriri na ọ hotelụ itụ, ọ ga-abụ na ha ga-enye gị ya n’efu ma ọ bụrụ n’ ụlọ ahịa mgbazinye dị ọtụtụ. Buy na-azụta nri na ihe ọ drinkụ drinkụ ma na-eme njem ọ bụla, nke ahụ abụghị nnukwu? Enwere tagzi ole na ole, ọnụego ya adịghịkwa ọnụ ala n'agbanyeghị na ịnwere ike ịgbazite ha ọkara ụbọchị ma ọ bụ ụbọchị niile ma ọ bụrụ na ịchọghị ịnya igwe kwụ otu ebe. E nwekwara ọrụ ụgbọ ala nke na-eburu gị n'agwaetiti ahụ.
Maka ụlọ ndị dara oké ọnụ enwere naanị otu nhọrọ: La Domaine De L'Orangerie. Emechaa enwere obere ụlọ nkwari akụ na ụfọdụ ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ ezinụlọ na kichin. Imirikiti ebe obibi dị na obodo, ọ bụghị n'ụsọ osimiri, mana dịka agwaetiti ahụ pere mpe, ị nọghị anya site n'oké osimiri. Na otu esi aga La Digue? A na-enwe ụgbọ mmiri asaa kwa ụbọchị site na Praslin. Njem ahụ bụ nkeji iri na ise ma kwụọ ụgwọ euro 15.
Site na Mahe enweghi ihe obula yabụ na ị ga-eji ụgbọ mmiri gaa Praslin wee si ebe ahụ gaa La Digue mana ọ na-eji otu tiketi. Enwere ọrụ abụọ kwa ụbọchị na tiketi na-akwụ ụgwọ ihe dị ka euro 65. A bit ọnụ, ọ bụghị ya?
Mahe, Praslin na La Digue si otú a bụ agwaetiti atọ kachasị njem nleta na Syechelle. Ha niile dị mma atọ, ọ dịghị nke ọ bụla ga-emechu gị ihu, mana nyochaa nke ọma ụdị ezumike ị na-achọ ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ha dịka ha kwesiri. Kechioma!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Nduzi » Seychelles, nke bụ agwaetiti ịhọrọ maka ezumike kacha mma na paradaịs
Ihe 8 iji hụ ma mee na Amsterdam
Ihe 10 ime na Venice